लागुऔषध मुद्दापछि दीपिका पहिलो पटक सामाजिक सञ्‍जालमा:: Naya Nepal
मुम्बई । अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लकडाउनको सुरुका दिनमा सामाजिक सञ्‍जालमा सक्रिय थिइन् । यद्यपि बलिउड लागुऔषध मुद्दामा उनको नाम बारिहएपछि भने दीपिका इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा देखिनै छोडिन् ।उनको इन्स्टाग्राममा अन्तिम पोस्ट २३ सेप्टेम्बरमा थियो । एक महिनापछि दीपिका पुनः इन्स्टाग्राममा देखिएकी छिन् । उनले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा खास सन्देश पोस्ट गरेकी छन् । दीपिकाले बाहुबली फेम्ड अभिनेता प्रभासको जन्मदिनको विशेष अवसरमा एक महिनापछि सामाजिक सञ्‍जालमा पोस्ट गरेकी हुन् ।उनले अभिनेता प्रभासको फोटो राखेर यसरी शुभकामना लेखेकी छन्, “डियर प्रभास, तपाईं सधै खुशी र स्वस्थ रहनू । आशा गर्दछु आगामी वर्ष तपाईंको लागि उत्कृष्ट हुनेछ । भारतीय सञ्‍चारमाध्यमका अनुसार दीपिका र प्रभास एउटा नयाँ चलचित्रमा सँगै काम गर्दछन् । सुशान्त मृत्यु प्रकरण लागुऔषधको मुद्दामा अघि बढेसँगै अभिनेत्रीहरु दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर र रकुल प्रित सिंहसँग एनसीबीले सोधपुछ गरेको थियो । साथै लागुऔषध मुद्दामा दीपिकाको ह्वाट्स एप च्याट पनि बाहिरीएको थियो, भने उक्त गु्रपको एडमिन दीपिका रहेको खुलासा पनि भएको थियो । यद्यपि दीपिका एनसीबीलाई बयान दिने क्रममा आफूले लागुऔषध कहिले पनि सेवन नगरको तर चुरोट भने लिने गरेको बताएकी थिइन् । र चुरोटको लागि उनीहरु कोड वर्ड्स प्रयोग गर्ने गरेको पनि बताए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा दुईजना अध्यक्ष छन्, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । गत भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकले यो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा प्रचण्ड रहने निर्णय नै गरेको छ । यस हिसावमा नेकपाका तल्ला पार्टी कमिटीमा कुनै निर्देशन वा सर्कुलर गर्नुपर्दा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । त्यस्तो निर्देशन वा पत्रलाई मात्र आधिकारिक मानिने नेकपाका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कात्तिक ५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई सम्बोधन गरेर एउटा निर्देशन पठाएका छन् । जुन निर्देशन नेकपाको लेटर प्याडमा लेखिएको छ । तर उक्त निर्देशनमा ओलीको मात्रै हस्ताक्षर छ । जबकी कुनैपनि निर्देशनलाई आधिकारिक मान्न दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । त्यसमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उक्त पत्र पठाएका हुन् या पार्टी अध्यक्ष भन्ने स्पष्ट छैन । नेकपा कर्णाली प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्माले यसअघि आउने निर्देशनमा दुवै अध्यक्षको हस्तक्षर हुने भएकाले त्यसलाई आधिकारिक मान्ने गरेको बताए । तर यसपटक ओलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई गुलावजंग शाहलाई गरेको कारवाही फिर्ता लिन भन्दै पठाएको पत्रमा ओलीको मात्र हस्ताक्षर भएकाले उक्त निर्देशन कसको हैसियतामा पठाएको भन्ने नै अस्पष्ट रहेको बताए । ‘यसअघि दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको निर्देशन आउने गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक आएको निर्देशनमा एक अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भनिएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएको हो भने त ठिकै हो, तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा नभएर अध्यक्षका रुपमा आएको हुनाले त्यसलाई वैध भन्न नसकिने स्थिति रह्यो ।’उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर स्थायी समिति र सचिवालयले निर्णय गरेको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षविनै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष भनेर एकै जनाको नामबाट निर्देशन आउँदा आफूहरु सुरुमा अलमलमा परेको बताए । शर्माले उक्त निर्देशन आफूले सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएको भन्दै आधिकारिक रुपमा आइनसकेको पनि जनाए । ‘त्यही पनि पार्टी कमिटीमा आधिकारिक रुपमा पत्र आएको थाहा छैन । अध्यक्षलाई आए बेग्लै कुरा हो तर, आधिकारिक रुपमा पार्टी कमिटिमा नआएकाले पनि त्यसलाई सुखद परिणाम भन्न सकिदैन’, शर्माको भनाइ छ । उनले कि पार्टीले कार्यकारी अध्यक्ष नै खारेज गरेको भन्न सक्ुनपर्ने भन्दै पहिला निर्णय जीवित र कार्यान्वयन भइरहेको छ भने पछिल्लो निर्णय मान्न नसकिने बताए । शुक्रबार बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीले गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेको विषयलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । उता, मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि प्रस्तावको नेतृत्व गर्दै आएका प्रदेश सदस्य यमलाल कँडेलले अनधिकृत बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताएका छन् ।
काठमाण्डाै – आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन शुक्रबार अपराह्न पूजाकोठा एवं दशैँघरमा स्थापना गरिएको नवदुर्गास्थलमा फूलपाती भित्र्याइएको छ । प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्षअन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीमा मनाइने फूलपाती पर्व शुक्रबार घरघरमा शास्त्रीय विधिअनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याएर मनाइएको हो ।
नवपत्रिकाको नामले चिनिने फूलपाती नववटी देवीको प्रतीकका रुपमा भित्र्याइ शास्त्रीय विधिअनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘केरामा ब्रह्माणी, दारिममा रक्तदन्तिका, धानमा लक्ष्मी, हलेदोमा दुर्गा, मानवृक्षमा चामुण्डा, उखुमा कालिका, बेलपत्रमा शिवा, अशोकमा शोकरहिता र जयन्तीमा कात्तिकी देवीको आह्वान गरी पूजा गरिन्छ, यी देवी नवदुर्गाका पार्षद् अर्थात् सहायक हुन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
देवीलाई बलियो बनाउन सहायक देवीको भूमिका हुने शास्त्रीय मान्यता छ । फूलपाती भित्र्याएपछि नवदेवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ । फूलपाती भित्र्याउनका लागि साइतको आवश्यकता नपर्ने धर्मशास्त्रविद् प्रा. डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
हनुमानढोकामा भित्र्याइयो फूलपात
हनुमानढोका दरबारको दशैँघरमा गोरखा जिल्लाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याउने परम्परा छ । गोरखाबाट धादिङ जिल्लाको जीवनपुरसम्म दशैंँघरका पूजारीसहित मगर जातिका छ जनाले ल्याउने र धादिङको जीवनपुरबाट काठमाण्डाैकाे जमलसम्म काठमाण्डाैबाट गएका ब्राह्मण जातिका छ जनाले ल्याउने परम्परा रहिआएको छ ।
यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण सीमित व्यक्तिले भौतिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर फूलपाती ल्याएको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिनुभयो । जमलबाट हनुमानढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी, गुर्जुका पल्टन, ब्याण्ड बाजा, पञ्चेबाजा र सांस्कृतिक नाचगानसहितको लावा लस्करका साथमा फूलपाती ल्याउने गरिएकामा यस वर्ष विधिमात्र गरेर पूरा गरिएको छ । यस वर्ष शार्दूलजङ्ग गुल्म, नागार्जुनबाट आएको सशस्त्र प्रहरीको समूह र मङ्गल धुन गाउने मङ्गलिनी समूहको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हनुमानढोका दरबार नासलचोकमा पूजा र मूलचोकमा बलिसहित पूजा गरेपछि दशैँघरमा फूलपाती भित्र्याइएको हो । राजतन्त्र रहुञ्जेल हनुमानढोका दरबारको दशैँघरमा फूलपाती भित्र्याउने क्रममा राज्य प्रमुखका नाताले राजाको पनि उपस्थिति रहने गरेकामा गणतन्त्र स्थापनापछि भने संस्कृतिमन्त्री उपस्थित हुने गरेको हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ । यस वर्ष भने कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम नगरि परम्परागत रुपमा मात्र फूलपाती भित्र्याइएको छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जमरा राखेपछि सुरु हुने नेपालीहरुकाे महान् चाड दशैँको सामाजिक चहलपहल भने यही दिनदेखि बढ्ने गरेकामा यस वर्ष त्यति छैन । यही दिनदेखि सरकारी कार्यालय पनि बिदा भएकाले विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न मानिस सपरिवार बसेर दुर्गाभवानीको प्रसादका रुपमा टीका थाप्न आ–आफ्नो घर फर्कने क्रम अझ तीव्र हुन्छ । नेपालका ग्रामीण भेगमा यही दिनदेखि दोबाटो, चौतारो र चौबाटामा हालिने लिङ्गे, जाँते र रोटे पिङले दशैँको रौनकलाई अझ बढाउँछ । यस वर्ष भने कोरोनाका कारण सहर बजारमा भिड हुने गरी पिङ हालेको देखिँदैन । बजारमा भने किनमेल गर्नेको भिड देखिन्छ । विशेषगरी खाद्य सामग्रीका पसलमा मानिसको भिड छ ।